अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकहरु भन्छन् – आँखा हेरेरै मृत्युको भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ – List Khabar
Home / समाचार / अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकहरु भन्छन् – आँखा हेरेरै मृत्युको भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ
अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकहरु भन्छन् – आँखा हेरेरै मृत्युको भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ
admin January 26, 2022 समाचार Leaveacomment 37 Views
एजेन्सी – के तपाईले कसैको मृत्युबारे भविष्यबाणी गर्नु भएको छ ? सर्वसाधारणका लागि निश्चिय पनि यो जटिल कार्य हो । तर, वैज्ञानिकहरुले भने मानिसको आँखा हेरेर उसको मृत्युको भविष्यवाणी गर्न सकिने बताएका छन् ।
यस्ताे भविष्यवाणी रेटिनाको अध्ययनमा आधारित छ । यो अध्ययन कुनै पनि व्यक्तिको स्वास्थ्यबारे गहिरो अध्ययन गर्न चिकित्सकलाई ‘झ्याल’ को काम गर्ने दाबी गरिएको छ । १९ हजार जनाको नेत्र कोषको अध्ययनपछि एआईले रेटिनाको आयु (रेटिन एज) भविष्यवाणी गर्न सफल भएको मेलबर्ननको सेन्टर फर आई रिसर्चले दाबी गरेको छ ।
Previous कतै तपाईंलाई डिप्रेसन भएको त छैन ?
Next जस्तोसुकै बिजी भएपनि एकपटक अवश्य पढौ ! नपढे तपाईलाई प’छुतो हुनेछ…..